बच्चाहरुको जिद्दी सुधार्ने चार उपाय - नेपालबहस
बच्चाहरुको जिद्दी सुधार्ने चार उपाय
| १६:२५:१५ मा प्रकाशित
२१ पुष, काठमाडाैं । हरेक अभिभावकहरूले आफ्नो सन्तानको खुशीका लागि कैयौं त्यागहरू गरिरहेकै हुन्छन् । चाहे त्याे ठुलो होस् वा सानो नै किन नहोस् । आफ्नो सन्तानलाई खुशी राख्न उनीहरूका हरेक हठहरुलाई पुरा गर्दछन् । तर अभिभावकको त्यहि त्यागलाई लिएर बच्चाहरू जिद्दी हुने गर्दछन् । उनीहरूको यहि जिद्दीपन पछि गएर स्वभाव बनिदिन्छ र बच्चाहरू अभिभावकको नियन्त्रणमा आउँदैनन् ।
यस्ता छन्, जिद्दीपन हटाउने चार उपाय !
१.बच्चाहरुलाई कराउने / पिट्ने गर्नु हुँदैन् । कैयौं पटक अभिभावकहरू सन्तानको जिद्दीलाई पुरा गर्न नचाहे वा नसके उनीहरूलाई कराउने र पिट्ने गर्दछन् । तर कराउँदा वा पिट्दा उनीहरूको हठ केहीबेर शान्त त होला तर यसमा सुधार भने आउन सक्दैन ।
कराउने/पिट्ने गर्नाले बालबालिकको मानसिकतामा असर पर्दछ । साथै कतिपय अवस्थामा डिप्रेशन समेत हुनसक्छ । जसले गर्दा उनीहरूको मनोबल घट्ने गर्दछ र कुनै पनि काम गर्नु पुर्व उनीहरू डराउने गर्दछन् । तसर्थ बालबालिकाको हठ पुरा गर्न नचाहदाँँ उनीहरूलाई कराउनुको सट्टा सम्झाउने गर्नुहोस् ।
२. बालबच्चाहरुको हरेक हठलाई पुरा गर्ने नगर्नुहोस् । यदि तपाईंको बच्चा कुनै हठ गर्छ भने त्यसलाई तत्काल पुरा नगर्नुहोस् । जस्तै खाना खाए लगत्तै बच्चाले चकलेट वा कुनै सामाग्री मागेमा उसको डिमाण्डलाई बेवास्ता गर्नुहोस् । यसो गर्नाले बच्चाले बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो माग भुलेर जान्छ ।
३.कतिपय बच्चाहरू नकराउने वा नपिट्ने अभिभावकको रिस वा सुझावलाई ठट्टामा लिने गर्दछन् । यदि यस्तो भएम वा तपाईंलाई बच्चाले धेरै दुखः दिएमा यसलाई वेवास्ता गर्नुहोस् । तर यदि उसमा सुधार नआएमा चेतावनी दिनुहोस् ।
४. यदि बच्चाले कुनै कुरामा जिद्दी गरिरहेको छ भने त्यसको सट्टामा अर्काे कुनै वस्तुमा भुलाउने प्रयास गर्नुहोस् । मानौं, तपाईंको बच्चाले नयाँ खेलौना मागिरहेको छ भने उसलाई पुरानो खेलौना दिएर भुलाउने गर्नुहोस् । यो नियम हरेक उमेरको बच्चामा लागु हुने गर्दछ ।
तपाईलाई कुन सन्तानको माया बढि लाग्छ ? १ हप्ता पहिले
पहिलो सन्तानपछि कति समयको अन्तरालमा अर्को जन्माउने ? २ हप्ता पहिले
नेपालमा महिलाभन्दा पुरुष बढी खुशी ! ( कारण यस्ताे छ ) २ महिना पहिले
लघुवित्तको संस्थापक साढे ४२ हजार कित्ता शेयर बिक्रीमा (विवरणसहित) १५ घण्टा पहिले
ओली माघ १७ गते शिलान्यास र जनसभालाई सम्बोधन गर्न चितवन जाने १९ घण्टा पहिले
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पशुपतिनाथमा सवा लाख दीप प्रज्ज्वलन १९ घण्टा पहिले
गन्धर्व संस्कृतिका धरोहर गायकको निधन १६ घण्टा पहिले
सुन्तलामा अज्ञात रोगले आक्रमण गरेपछि किसान अन्योलमा १५ घण्टा पहिले
सोमबार यी तीन कम्पनीको शेयरमूल्य समायोजन १९ घण्टा पहिले
विषम मौसमी घटनाबाट यस शताब्दीमा चार लाख ८० हजारको मृत्यु १५ घण्टा पहिले
टोखाको न्यायिक समितिमा २७ उजूरी दर्ता ६ दिन पहिले
गुल्म र नगरपालिकाको आयोजनामा स्वास्थ्य शिविर १ दिन पहिले
पत्रकारको भेलामा ओलीको गर्जन: भाँडभैलो रोक्न संसद बिघटन ५ दिन पहिले
विज्ञापन बजार व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा बोर्ड र सरकारको ध्यानाकर्षण २ हप्ता पहिले
जुवाखालमा प्रहरीकाे छापा, तीन लाखसहित १५ जना पक्राउ ३ हप्ता पहिले
माघ १४ बाट कोरोना खोप सुरु २ दिन पहिले
सशस्त्र प्रहरीकाे परीक्षामा ११ नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ ३ हप्ता पहिले
इटलीद्वारा आगामी अप्रिल ३० सम्म सङ्कटकाल विस्तार २ हप्ता पहिले
संक्रमणबाट विदेशमा थप एक नेपालीको मृत्यु ३ महिना पहिले
गण्डकीमा थप १७ जनामा कोरोनाको पुष्टि ७ महिना पहिले
सुक्खा पहिरोले नारायणगढ–मुग्लिन सडक दुईतर्फी अवरुद् ६ महिना पहिले
लघुवित्तका ऋणी कृषकले पाएनन् ब्याज, अनुदान र बीमा सहुलियत ११ महिना पहिले